Eyecare - A Hla Thit
ဆီးခြိုရောဂါကမကျြစိကိုထိခိုကျစနေိုငျလား? အပိုငျး (၄) အမွငျလှာထိခိုကျခွငျး
ဆီးခြိုရောဂါကမကျြစိကိုထိခိုကျစနေိုငျလား? အပိုငျး(၅) ဘယျအခြိနျတှမှောစဈဆေးဖို့လိုမလဲ?
၅။ ဘယျအခြိနျတှမှောစဈဆေးဖို့လိုမလဲ? ဆီးခြိုရောဂါရှိသူတှဟောမကျြစိစဈဆေးခွငျးကိုအနညျးဆုံးတဈနှဈ တဈခါလောကျလုပျသငျ့ပါတယျ။...
၁။ဦးခေါင်းအနောက်ဘက်သို့မော့ထားပါ။ ၂။အောက်မျက်ခွံကို အောက်ဘက်သို့အနည်းငယ်ဆွဲလိုက်လျှင် မျက်ခွံအတွင်းပိုင်းသည်အိတ်ပုံစံဖြစ်လာမည်။ ၃။မျက်စဉ်းဘူးကိုဇောက်ထိုးအနေအထားအတိုင်းထား၍ မျက်ခွံ အိတ်လေးအတွင်းဝင်အောင်ထည့်ပါ။မျက်စဉ်းဘူးထိပ်အဝကို...
သင့်မျက်တောင်ခတ်ချိန်ဟာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၁ စက္ကန့်ရဲ့ ဆယ်ပုံတစ်ပုံသာ ရှိပါတယ်...